Horudhac: Liverpool vs Southampton… (Saints oo doonaysa inay minin iyo marti u garaacdo Reds horyaalka markeedii saddexaad Taariikhda) – Gool FM
Ahmed Nur May 8, 2021
(Liverpool) 08 Maajo 2021. Liverpool ayaa doonaysa inay guuleysato kulankan si ay sare ugu qaado fursaddeeda inay ku dhammaysato afarta sare ee horyaalka si ay ugu soo baxdo xilli ciyaareedka soo socda tartanka Champions League, marka ay caawa marti gelinayaan kooxda Southampton kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Reds ayaa badisay kaliya hal kulan shantii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, barbaro ayay galeen saddexdii kulan ee ugu dambeeyay, waxaana ay wajahayaan kooxda Saints oo isha ku haysa inay dhammeystirto labada kulan ee horyaalka minin iyo marti u marto markii seddexaad taariikhdooda, iyadoo horey sidaas u sameysay xilli ciyaareedyadii 1960-61 iyo 2003-04.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:30 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Tababaraha Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sheegay inuu qiimeyn ku sameyn doono taam ahaanshaha dhowr ciyaartoy oo aan la magacaabin, kuwaasoo kalkaaliyeyaasha caafimaadku ay la tacaalayaan dhaawacyadooda fudud.
Nat Phillips waa diyaar oo waa la heli karaa, laakiin Jordan Henderson ayaan wali tababarka buuxa ku soo laaban.
Daafaca Kooxda Southampton ee Jannik Vestergaard ayaa ciyaari karta kulankan kaddib markii uu kaarka casaanka ah qaatay ciyaartii ay ka horjeedeen Leicester City, maadaama laga laabtay go’aankaas.
Weeraryahanka amaahda ah ee Takumi Minamino ayaan wajihi doonin kooxda milkiyaddiisa iska leh, halka Ryan Bertrand uu weli ku maqan yahay dhaawac kubka ah.
Danny Ings ayaan taam u ahayn inuu wajaho kooxdiisii hore, laakiin wuu soo laaban karaa ka hor dhammaadka xilli ciyaareedkaan, maadaama uu ka soo kabanayo dhibaato dhanka muruqa ah.
>- Guushii 1-0 ee ay Southampton ka gaartay Liverpool bishii Janaayo ayaa soo gabagabeysay lix kulan oo xiriir ah oo ay guuldarro kala kulmayeen Reds kulammada horyaalka.
>- Saints ayaa doonaysa inay minin iyo marti u garaacdo Liverpool markeedii saddexaad taariikhda, kaddib markii ay min labada kulan ee horyaalka wada garaaceen Reds xilli ciyaareedyadii 1960-61 iyo 2003-04.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda Anfield ku soo dhoweysay Saints, waxaana ay guuleysteen saddexdii kulan ee ugu dambeeyey, iyadoo kulammadaas cel-celis ahaan la iska dhaliyey 10-0.
>- Liverpool ayaa guuldarrooyin badan la kulantay kulammada horyaalka iyo koobabka sanadkan 2021, waana in ka badan inta ay guuleysteen.. (9 Guul ayay gaareen sanadkan, halka ay 10 Guuldarro la kulmeen).
>- Waxa ay la dhibtoonayaan lix guuldarro oo kulammada horyaalka ku soo gaaray garoonkeeda hal xilli ciyaareed markii ugu horreysay muddo 67 sano, Liverpool ayaanan wax guuldarro ah garoonkeeda ku qaaday 7 kulan tan iyo xilli ciyaareedkii 1937-38.
>- Mo Salah ayaa dhaliyey 7 gool 7 kulan oo horyaalka Premier League ah uu kaga horyimid Southampton oo ay ku jiraan shan gool saddexdii kulan ee uu kula ciyaaray Anfield.
>- Klopp ayaa hal guul u jira inuu 100 guulo ah ku gaaro garoonka Anfield isagoo ah tababaraha Kooxda Liverpool tartammada oo dhan, waxaana uu hadda ku gaaray garoonkan 99 Guul, 35 Barbaro iyo 17 Guuldarro.
>- Saints ayaa heshay dhibcaha ugu yar oo ah 11-dhibcood, waxaana laga dhaliyay goolasha ugu badan oo ah 40 gool horyaalka Premier League sanadkan.
>- Siddeed guuldarro ayay la kulantay sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League oo ay marti ahayd kooxda Tababare Ralph Hasenhuttl.
>- Southampton ayaa guuleysan karta labada kulan ee heerka koowaad minin iyo martida, iyadoo ka hor jeedda kooxda markaas difaacanaysa horyaalka hal xilli ciyaareed gudihiis markii ugu horreysay.
>- Wax guul ma gaarin todobadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka marka uusan Danny Ings u ciyaaraynin, saddex barbaro ayuu gashay, afarna waa laga badiyay.
Horudhac: Manchester City vs Chelsea... (Miyey City caawa u dabaal dagi doontaa hanashada Premier League?)